सावधान ! दिउँसो सुत्ने बानी छ भने हटाउनुहोस् नत्र निम्तिन्छन् यस्ता समस्या « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
सावधान ! दिउँसो सुत्ने बानी छ भने हटाउनुहोस् नत्र निम्तिन्छन् यस्ता समस्या
२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १४:०७
अचेल मानिसहरुको व्यस्त जीवनशैलीले सुत्ने सम्मको फुर्सद हुँदैन । दामका पछि दौडिँदा सुत्ने काम बिर्सिन्छन् मान्छेहरु । यसले तत्काल समस्या नदेखिए पनि कालान्तरमा ठूलो समस्या निम्तिन्छ । चिकित्सकहरु समयमै र राति नै सुत्न सुझाउँछन् ।
राति निद्रा नपरेपछि मानिसहरु फुर्सद मिल्यो कि के रात के दिन भन्दै सुतिहाल्छन् । तर दिउँसो सुत्ने बानी निकै नराम्रो हो । यसले स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । दिउँसो सुत्ने बानीले बिएमआई (बडी मास इन्डेक्स) ३७ भन्दा धेरै हुँदा लिभर क्यान्सरको खतरा २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन जान्छ । दिउँसोको समयमा एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा टाइप टु डायबिटिजको खतरा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ ।
युनिभर्सिटी अफ टोक्योका अनुसन्धानकर्ताले हालसालै ३ लाख व्यक्तिमा गरेको अध्ययनले दिउँसो एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा धेरै नोक्सान हुने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै मुटुसम्बन्धी रोग, ब्रेन स्ट्रोक र डायबिटिजको खतरा बढ्छ । दिनभरि सुत्दा रातमा निद्रा लाग्दैन ।
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १४:०७
यौन सम्बन्धले हुने फाइदाहरु : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली बलियो, क्यान्सरको जोखिम कम
मानव जीवनमा यौन सम्बन्ध शारीरिक सुखका लागि मात्रै होइन । यौन सम्बन्धले शारीरिक सुखसँगै मानसिक
यस्ता छन् विज्ञको सुझाव : लकडाउनको समयमा कसरी बढाउने शारीरिक सक्रियता ?
विश्व ब्यापी कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमका कारण जारी लकडाउनका बेला घरमै बसेर शारीरिक सक्रियता कायम
लकडाउन अवधिमा ७० लाख महिला गर्भवती हुनसक्ने : यूएनएफपीए प्रतिवेदन
राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले कोभिड –१९ को महामारी विश्वव्यापि फैलिरहेको हुनाले धेरै महिलाहरु
लकडाउनमा थाहा पाईराख्नुस् केहि टिप्स : घरमै छन्, कपाल सेतो हुनबाट जोगाउने यस्ता उपायहरु
कलिलो उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याबाट धेरै मानिस हैरान भएका हुन्छन् । फुलेको कपालले गर्दा सौन्दर्यमा